कोइराला र पराजुली दुबै भन्छन्, समृद्ध नवलपुर म बनाउँछु
By vijayafm on	 November 26, 2017 अन्तरवार्ता, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, बिचार, राजनीति, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा निर्वाचनका लागि पूर्व नवलपरासीमा चुनावी अभियानमा तातेको छ । दलहरु आफ्ना एजेण्डा जनतालाई सुनाउन र जनताको मन तान्न तल्लिन रहेका छन् । पूर्व नवलपरासीको क्षेत्र नं। १ मा मात्रै प्रतिनिधि सभाका लागि ८ वटा दलहरुको उम्मेदवारी रहेको छ । ठूला दलहरुको चुनावी अभियानले तीव्रता पाइरहेको छ भने साना केही दलहरुको चुनावी अभियान खासै देखिदैन । नेपाली काँग्रेस, बामगठबन्धन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्तिले आफ्ना चुनावी अभियानलाई तीव्र पारिरहेका छन् । यस मिसन इलेक्सनको विशेष स्तम्भमा नवलपुर क्षेत्र नं। १ का प्रतिनिधि सभा तर्फ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला र माओवादी केन्द्रका भविसोर पराजुली संगको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वार गैँडाकोट हो, यहाँबाट चिनको कोरला नाका जोड्ने राजमार्ग बनाउने मेरो सपना छ
चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
जोडतोडका साथ अघि बढिरहेको छ । म आइतबारदेखि चुनावी अभियानमा जुटेको छु । आइतबार यस क्षेत्रको पहाडी इलाकाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । गोरखामा पनि चुनावी सभामा सहभागी भएर फर्किएको छु । अब चुनावी अभियान तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
यसपटकको चुनावको मुख्य एजेन्डा के हो ?
अहिले मुख्य एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि काँग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान काँग्रेसको नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान भन्ने मूल नारा बनाएको छ । त्यसैले अब नेपाली काँग्रेस समृद्ध देश बनाउने मुख्य एजेन्डा बोकेर चुनावमा होमिएको छ ।
यहाँको क्षेत्रका लागि यहाँको एजेन्डा के हो ?
हेर्नुस्, यो क्षेत्रको लागि त मुख्य कुरा विकास नै हो । विकासभन्दा बित्तिकै बाटोघाटो, विद्युत्, अस्पताल, खानेपानी र शिक्षाको कुरा आउँछ । समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने र यो क्षेत्रलाई नमुना क्षेत्र बनाउने मेरो विशेष सपना छ । मैले राखेका अधुरा सपनाहरु पूरा गर्नु मेरो मुख्य एजेन्डा हो ।
सपना भन्नुभयो, त्यो सपना के हो ?
एउटा समृद्ध जिल्लाका रुपमा नवलपरासी र नवलपुर क्षेत्रलाई बनाउने हो । अझै भनौं यो क्षेत्र नं. १ लाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, अत्याधुनिक कृषि क्षेत्र बनाउने, सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, युवाहरुलाई विदेश पलाउन हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सुविधायुक्त तथा गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने मेरो सपना हो । पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वार गैँडाकोट हो । यहाँबाट चिनको कोरला नाका जोड्ने राजमार्ग बनाउने मेरो सपना छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक काम पनि भइरहेको छ ।
१० वर्ष भयो यो क्षेत्रबाट यहाँले प्रतिनिधित्व गरेको, १० वर्षमा यहाँका यी सपनाहरु कति पूरा भए ?
कामहरु भएका छन् । धेरै महŒवपूर्ण कामका आधारहरु तयार भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा हामी सरकारमा भएनाँै । त्यसैले धेरै काम हुन सकेन । दोस्रो कार्यकालमा कामले धेरै गति लिएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर, दलदलेदेखि डेढगाँउको बाटो, बाह्रखोलहुँदै बुलि∙टार जोड्ने बाटो बनिरहेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि काम भएका छन् । दुईवटा ठूला पुलहरु बन्दैछन् । यो क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने, दुर्घटना धेरै हुने क्षेत्र भएकाले एउटा ट्रमा सेन्टर बनाउने मेरो योजना छ । अन्य केही ठूला योजनाहरुका आधारभूत कामहरु भइरहेको छ । सानातिना कामहरु त दर्जनौँ भएका छन् । अब यी योजना निर्माणले गति लिनेछ ।
दश वर्षमा पूरा नभएका यी योजना अब पाँच वर्षमा सबै पूरा हुन्छन् त ?
हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने विश्वास छ । मैले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो किनकि त्यो काम पूरा गर्न मलाई जति सहज अरुलाई हुँदैन । अर्को कुरा अहिलेसम्म संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनमा धेरै समय खर्चनुप¥यो अब विकासका लागि समय समर्पित गर्ने हो । अहिलेसम्म राजनीतिक कारणले, संविधान निर्माणका कारणले विकासले सोचेअनुरुप गति लिन नसकेको हो । अबको मेरो कार्यकाल पूर्णरुपमा समृद्ध र विकसित क्षेत्र बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।
अहिले बामगठबन्धन छ, यसबाट काँग्रेस डराएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
मैले भन्दा पनि जनताले यस गठबन्धनलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो ।यो गठबन्धनले त जनतालाई फाइदा नै भएको छ । मलाई लाग्छ बामगठबन्धनले देशमा अधिनायकवाद ल्याउन खोजिरहेको छ भनेर जनता त्रसित भएका छन् । दुईतिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर देशमा साम्यवाद ल्याउने बामगठबन्धनको कुराले लोकतान्त्रिक जनतालाई काँग्रेसप्रति आकर्षण बढाएको छ । अर्कातर्फ काँग्रेसभित्र पनि यो कुराले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मजबुत एकता कायम गराएको छ । त्यसैले यो गठबन्धनको कुराले समग्रमा फाइदा पुगेको छ । बामगठबन्धनको साम्यवाद ल्याउने सपना पूरा हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।
गठबन्धन नै नहुँदा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसको नजिता कमजोर देखियो, अब झन् गठबन्धन हुँदा त यसले प्रभाव पार्ला नि ?
हेर्नुस्, मैले भनिहालेँ कार्यकर्तामा बामगठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँछ कि भन्ने त्रास छ । अहिले नेपाली काँग्रेसमा सबै क्षेत्रमा एकताको भाव छ । अर्कातर्फ नेपाली काँग्रेसले देशको विकासका लागि धेरै काम गरेको छ । आकाशमा जहाज उड्न थालेका छन् । हरेकको हातमा मोबाइल छ । ८ हजार किलोमिटर रहेको बाटो ८१ हजार किलोमिटर बाटो बनायो । राजनीतिक परिवर्तन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा भयो । त्यसैले काँग्रेसप्रति आकर्षण छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
यहाँले काँग्रेसले धेरै ग¥यो भन्नुभयो तर आम जनतामा नेताले केही गरेनन्, देश बिगारे भन्ने गुनासो छ ?
हेर्नुस्, हामीले गरेका कामका प्रचार गर्न नजानेर हो । बामपन्थीहरु सानो कामलाई रटेकोरट्यै गरेर ठूलो काम गरेको जस्तो गर्छन् । हामी आपूmले गरेका काम जनतालाई भन्न सक्दैनौं । देशमा विकासको जग बसालेको काँग्रेसले हो । अहिले नै काँग्रेसले गरेका काम जति मैले भनेँ त्यो यसभन्दा अगाडि यहाँले पनि सुन्नुभएको थिएन होला । यही हो फरक । काँग्रेसले नै बनाएको योजनामा वृद्धभक्ता दिएर अहिले एमालेले जहिले त्यही रटिरहेको छ । वृद्धभक्ता शतप्रतिशत काँग्रेसले नै बढायो तर त्यसलाई आझेलमा पारिन्छ ।
दश वर्षदेखि यहाँलाई यो क्षेत्रका जनताले जिताइरहेका छन् अब पनि फेरि शशांक कोइरालालाई जिताउनुपर्ने आधार के छ ?
मलाई भन्दा पनि नेपाली काँग्रेसलाई जिताउनुपर्छ भन्छु म त । नेपाली काँग्रेसले नै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो अब समृद्धिको नेतृत्व पनि काँग्रेसले नै गर्ने हो । मेरो क्षेत्रको कुरा गर्दा अघि नै भनिसकेँ मैले यो क्षेत्रलाई समृद्ध, विकसित र सुन्दर क्षेत्र बनाउने सपना कोरेको छु । केही पूरा पनि भएका छन् भने केही कामका आधारहरु तयार भएका छन् । केही महŒवपूर्ण कामहरुको परिणाम पनि देखिएको छ । अबको कार्यकालमा त्यो सपनालाई पूर्णरुपमा साकार पार्ने मेरो योजना छ । यो क्षेत्रलाई औद्योगिक, कृषिमा आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगारी र विकसित बनाउनका लागि म जनाताका माझमा आएको छु ।
यहाँ नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ ? काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्ने भनेर भन्यो तर खास मजबुत
गठबन्धन गर्न सकेन नि किन हो ?
हो हामीले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाँउमा ल्याउने प्रयास गरेका थियौं । सिट बाँडफाँडमा कति कुरा मिल्न सकेन त्यसैले सोचेजस्तो गठबन्धन बन्न सकेको छैन । तर पनि कतिपय ठाँउमा हामी गठबन्धन गरेरै अगाडि बढेका छौं । अझै पनि गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हेर्नुस्, चुनाव हुँदैछ । यसमा तपाईंको विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । आवेग र उत्तेजनाभन्दा भविष्य सोचेर मत हाल्नुहोस् । आज तपाईंले हालेको मतले दीर्घकालसम्म असर पर्छ । सही र गलत छुट्याउन सक्नुभएन भने भविष्यमा पश्चात्तापमा पर्नुहुन्छ । त्यसैले कहिल्यै नपछुताउने गरी मतदान गर्नुहोस् । नेपाली काँग्रेसमात्र देशको समृद्धि र जनताको स्वतन्त्रताका पक्षमा लड्ने पार्टी हो । सानातिना गुनासो र असहमति छाड्नुहोस् सिंगो देशलाई जिताउनुहोस् । त्यसका लागि काँग्रेसमात्र तपाईंको विकल्प हो भन्न चाहन्छु ।
बाम गठबन्धनका कारण पनि म बलियो महशुस गर्दछु – भविसोर पराजुली
चुनावी अभियान के भइरहेको छ ?
जनताको ठाममा घरदैलो गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ । अरु बृहत चुनावी कार्यक्रमका लागि तयारी चल्दै छ ।
नवलपुर क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा पुगिसक्नुभयो ?
यस क्षेत्रमा ५२ वटा वडा छन् । सबै वडाका वाड कार्यालयमा पुग्ने र त्यहीबाँट चुनावी कार्यक्रम गर्ने हो । अनि सकभर घरदैलो कार्यक्रमका साथ सबैको घरमा पुग्ने भनेका छौँ ।
जित्ने संभावना देख्नुभएको छ ?
जिति सुनिश्चित छ । लामो समय देखि यहाँका जनताले यहीँको उम्मेदवारर खोजेका थिए । नवलपुरलाई सुन्दरर र शान्त बनाउने अभियान चलाएको पनि थिएँ । यस कारण ले पनि अभियानकै नेतृत्व गरेको व्यक्ती उम्मेदवार भए पछि सबैले विश्वास गर्नुभएको छ । २०५१ सालदेखि यहीँ बस्दै आएको छु यहाँको भूगोल बुझेको छु यस कारण पनि यहाँका जनताले विश्वास गर्नुभएको छ ।
बामगठबन्धनमा भएर पनि बलियो मशुस गर्नुभएको हो ?
त्यो त एकदमै हो । बाम गठबन्धनका कारण पनि म बलियो महशुस गर्दछु । यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि, हामीले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सबै बाम एक हुनु आवश्यक थियो । अहिले एक ठाममा आएका छाँै । यो बाम एकताले विजय सुनिश्चित छ ।
यस अघि एक्लै लड्दा ६४ सालको चुनाव भन्दा ७० को चुनावमा माओवादीको मत धेरै घटेको थियो, अहिले पनि घट्ने डर पो छ कि ?
छैन, अहिले झन् उत्साह थपको छ । आँकडा झन् बढ्ने अनुमान गरेका छौँ । बाम एकताले त झन् जित ठूलो मतान्तरले हुने अनुमान गरेका छौँ ।
जीत सुनिश्चित छ भन्दै गर्दा एजेण्डा चाँहि के के छ ?
हाम्रा जितका थुप्रै प्रतिवद्धताहरु झन् । जनतका समस्या पहिचान गरेका छौँ । ती समस्या निराकरणका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो पनि तय गरेका छौँ । विकास का लागि बहुमतको सरकार र स्थायी सरकार आवश्यक हो । बाम एकता पनि यसैका लागि भएको हो । बाम एकताले हाम्रा एजेण्डा पुरा गर्न सहजता प्रदान गनेछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हामीले प्रष्ट योजना अघि सारेका छौँ । नारायणीको तटवन्धन नवलपुर क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक छ यसका लागि पनि हामी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । कृषि क्षेत्रको भण्डारको रुपमा रहेको नवलपुरमा सिंचाईको आवश्यकता छ । कालिगण्डकीको पानी ल्याउन सक्यौँ भने रुपन्देहीसम्म सिँचाई गर्न सकिन्छ । पर्यटनको योजना समेत बनाएका छौँ । यसैगरी सौराहा पोखरा र लुम्बिनीको केन्द्र बनाउन आवश्यक छ । केरुगंको रेल पोखराबाट नवलपुर हुँदै लुम्बिनी लैजान सकियो भने नवलपुरको विकासले द्रुत गतिमा जान्छ यसका लागि योजना बनाएका छौँ ।
यी योजना पुरा हुन्छन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
हो यी कुरामा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । जनताका प्रतिवद्धता हिजो पनि हाम्रो पार्टीले गर्न खोजेको हो, यसका लागि स्थायी सरकार नहुँदा अप्ठ्रो भयो । अब यो बाम एकताले स्थायी सरकार बन्छ त्यसपछि जनताको प्रतिवद्धताहरु पुरा हुने छन् ।